परिवर्तन देवकोटा १० जेठ । 200 4.3K
सरकारले हवाई मार्गदेखि, स्मार्ट सिटि, औद्योगीक क्षेत्र लगायतका विभिन्न योजनाहरु अघि सारेको छ, यी महत्वकाँक्षी योजना हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
पाटन अर्थात ‘डजन्ट स्लीप सीटी’ पर्यटकहरुले दिउँसोको सयममा भन्दा रातीको सयमा आउँदा बस्न योग्य बनाउन हामीले ‘होम स्टे, रात्रीकालिन जिवन, साँस्कृतीक जीवन्त सम्पदाको संरक्षण’को काम थालनी गरेका छौं । ‘लण्डन सिटी नेभर स्लीप अ डे’ भन्ने गरिएको छ । हामीले पनि यहाँ ‘पाटन सीटी डजन्ट स्लीप’ किन ? भन्ने गरी काम अघि बढाएका छौं । यस्ता विषयमा सबैले मिलेर सम्पदाको संरक्षण गर्ने हो । पर्यटकहरु आउँदा उनीहरुलाई खाने र बस्ने व्यवस्था गरिनेछ । बिहिवार, जेठ ९, २०७६, ०५:१५:००
मामाको जोडले भयो हाम्रो विवाह हाम्रो बिहे हुँदा उहाँ पन्ध्रवर्षको हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि मात्रै हाम्रो भेट भएको यो । बिहेपछि केटाकेटीदेखि नै सँगै जन्मेको, सँगै हुर्केकोजस्तो भयो । सानैमा विवाह भएकोले हामीहरू साथी र दिदीभाइजस्तो थियौं । बिहिवार, बैशाख २६, २०७६, ०५:४८:००
बजेटको आकार होईन, खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ शुक्रवार, बैशाख २०, २०७६, ०५:५५:००
सबै नेता कार्यकर्ताको सहमति अनुसार अगाडि बढ्छु : पप्पु राजनीति गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा सबैलाई अधिकार बराबरी छ । अधिकार सरह नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता सबैमा हुन्छ । अगाडि बढ्ने कुरामा सबैको मन हुन्छ । तर पार्टीको अनुशासन अनुसार पनि चल्नु पर्छ । नेतृत्वमा पनि परिवर्तन भैरहन्छ । समय अनुसार नेतृत्वमा परिवर्तन हुन पनि आवश्यक छ । म एक इमानदार मान्छे हुँ । सबै साथीहरुलाई समेटेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । जनताको सेवा गर्नेमा सबै नेताको भूमिका हुनुपर्छ । शुक्रवार, बैशाख १३, २०७६, ०४:५२:००
पर्यटन व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्न सडक खाना महोत्सव शनिवार, चैत्र ३०, २०७५, ०४:४१:००
'राजनैतिकसंगै प्रशासनिक स्थिरता आवश्यक' आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरुबाट सकेसम्म धेरै लगानी जुटाउनुपर्‍यो । अहिले लगानी सम्मेलन भयो राम्रै भयो । तर सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, लगानीकर्ताहरुसँग बसेर प्रस्ताव राख्दैमा लगानी आउने भन्ने होईन । यो त केवल प्रस्ताव मात्रै हुन् । यसको लागि त देशको अवस्था सुदृढ हुनुपर्छ । त्यसै लगानीको आश गरेर हुन्छ ? शुक्रवार, चैत्र २२, २०७५, ०४:४९:००
'लगानीकर्ताले अब कुनै झन्झट बेहोर्नुपर्दैन' शुक्रवार, चैत्र १५, २०७५, ०३:१०:००
लगानी सम्मेलन र विप्लव आन्दोलनः विदेशीहरुले नेपालमा गर्लान् त लगानी ? बिहिवार, चैत्र १४, २०७५, ०३:११:००
बीमा कम्पनीहरुमा ‘बिग मर्ज’ अत्यावश्यक बिहिवार, चैत्र ७, २०७५, ०३:४०:००
जनतालाई बैंकिङमा जोड्ने माध्यम नै हामी हौं बिहिवार, फाल्गुन ३०, २०७५, ०३:३०:००
प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी गायिका सरु भन्छिन्ः सामाजिक सञ्जालविना बर्बाद हुन्छु कतिपयले आफ्नो गीतमा अरुलाई पैसा दिनुभन्दा आफै गर्दा चर्चित पनि हुने र पैसा पनि जोगिने कारणले यस्तो गरेको हुनसक्छ । कोही कोहीले गायन र मोडलिङमा दुबैमा राम्रै गरेका पनि छन् जस्तो की रामकृष्ण ढकाल, प्रमोद खरेल हेमन्त शर्मा । मगलवार, फाल्गुन २८, २०७५, ०३:५५:००
'आकर्षक आयोजनाहरुमा मात्र जनताको लगानी पर्छ' सरकारले अबको दश वर्षलाई उर्जा दशकको रुपमा घोषणा समेत गरेको छ । त्यसको कार्यन्वयन स्वरुप अहिले त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाले जनताको शेयर पाईसकेको छ र निर्माणको प्रक्रियामा पनि गईसकेको छ । शुक्रवार, फाल्गुन १७, २०७५, ०३:५१:००
फुर्सदमा विहे गर्ने सोच बनाएकी अंकिता, जसको स्वरले देशविदेशकै स्टेज तताउँछ रोल्पा बुढागाउँमा जन्मिएकी गायीका अंकिता मगर छोटो समयमा नै देश तथा विदेशमा परिचय जमाउन सफल भएकी छिन् । मगलवार, माघ २९, २०७५, ०२:४१:००
मैथली गीत संगीतले फड्को मार्न थालेको छ हेर्नुुस म एक मधेसी भए पनि म एक नेपाली नागरिक हो । नेपाली नागरिक भएकाले मेरो देश, मेरो राष्ट्र मलाई प्यारो छ । त्यसैले मेलै मधेस र पहाडलाई कलाको माध्यमबाट जोड्ने प्रयास गरेको छु । हामी नेपाली एक भएर बाँच्नुपर्छ । यो गितले पनि यहि सन्देश दिन खोजेको छ । र रह्यो कुरा नेपाली गीतको मैथली गीतमा त मैले पहिलादेखि नै गर्दै आएको छु यो मेरो नयाँ पाइला हो । आइतवार, पुष २२, २०७५, ०१:१२:००
‘हिजोआज बजारले गीत भाइरल हैन, भाइरस बनाएको छ’ शुक्रवार, असार १, २०७५, ०६:०६:००